Dhisme la taaban karo oo biriijka metrobus ku yaal Avcilar ayaa dumay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulXayiraaddii xayiraadda biriijka metrobus ayaa burburay Avcilar
16 / 07 / 2012 34 Istanbul, DUNIDA, GUUD, Headline, TURKEY
Khadadka Metrobus ee shil cusub ayaa shalay lagu daray dhimashada. Avcılar-Beylikdüzü mareenka mareenka sababtoo ah shaqooyinka dib-u-cusboonaynta sababtoo ah buundada maneuverka lagu tuuray inta lagu guda jiro burburinta dhismooyinka la taaban karo. Shaqaalaha 1 dhintay, shaqaalaha 2 ayaa ku dhaawacmay. Yakup Kavak ayaa ku geeriyooday meelo ka mid ah goobaha. Maqal-xayiridda mowqifka ayaa joojiyay muwaadiniinta waddada udhaxeysa jidka Avcılar-Shukrubey waa inay socotaa.
Muwaadiniinta ka soo horjeeda xaaladdaas marar badan ayaa la xaajooday maamulka degmada magaalomadaxda. In shaqada laga saaro qaybaha la taaban karo ee deegaanku waxay soo jiidatay maqnaanshaha tallaabooyin kasta. Berrito Beylikdüzü-Söğütlüçeşme safarka socdaalka ayaa bilaabi doona maxkamad.
Dhismaha wadada E-5 ee Avcılar-Beylikdüzü oo ku yaala Avcılar ee buundada waddada ee wiishka inta lagu jiro geedi socodka wax lagu qaado, ayaa kooxo shaqaale ahi ku dhacay. Yakup Kavak wuxuu ku dhintay dhimashooyinka la taaban karo. Shaqaalaha Hasan South iyo Adem Yıldırım ayaa ku dhaawacmay. Dhaawacyada, ka dib markii ugu horeysay ee faragelinta kooxaha caafimaadka ee Bakirkoy Dr. Tababarka martida ee Sadi iyo Isbitaalka cilmi baarista. Meydka Kavak ayaa laga saaray meelo la taaban karo iyadoo la adeegsanayo crane ka dibna loo qaaday xerada.
Safafka dheer ee gaadiidka ee E-5 sababtoo ah shil. Khadadka Metrobus ee waxyaabaha la taaban karo ee muwaadiniinta ee Avcılar-Shukrübey ayaa istaagay E-5 waa inay socotaa. Waxaa jiray wadahadalo marmar ah oo dhex maray rakaab iyo saraakiil kuwaas oo ka jawaabay xaaladan.
Merve Doğru, oo lahaa inuu u socdo Shukrübey joogta Avcılar, ayaa sheegay in ay ku dhaawacmeen hal maalin la mid ah. Xaqiiqooyinka '' buundooyinka way isbeddelayaan ama joogsadeen maalin kasta sababtoo ah joojinta metrobus joogta Beylikdüzü. Subax kasta waxaan ka helnaa wax ka duwan. Maanta waxaan ku khasbannay inaanu tagno Shukrübey joogsiga. Degmada ayaa laga yaabaa inay basaska raacaan. Tani way jiran tahay kulaylka iyo dadka waayeelka ah waxay ku adagtahay socodka, "ayuu yiri.
Qaadashada qaybaha la taaban karo ee buundada ayaa sii waday saliida halkaa oo dhagxaanta la taaban karo ay burburtay. Waxaa la ogaaday in saraakiisha daraasaddu ayan ku qaadin taxadar ku filan deegaanka. Muwaadiniinta, si fudud u galaya iyo soo galaya aagga shilka iyaga oo aan la kulmin caqabado. Shaqaalaha ka qaybqaata burburinta biriijka buundada ma burburin, ayaa sheegay in burburku uu dhacay. Shaqaalaha qaarkood oo aan cashar ka qaadin shilka ayaa sii waday inay shaqeeyaan iyadoon xidhnayn koofiyadaha ma aysan indhaha ka baxsan.
Topbas ayaa goobta ku soo galay by metrobus
Duqa caasimadda ee Istanbul Kadir Topbas, Avcılar metrobus buundada ayaa burburay. Topbas, Dhamaanteen nala wadaag. Waxaan tacsi tiiraanyo u dirayaa qoyskii shaqaalihii dhintay. " Topbas oo kugula taliyey shaqaalaha, ayaa mar kale ka tagay Avcılar metrobusle.
Ogeysiinta Ugaarsiga: Murashaxiinta Macluumaadka Dijitaalka ah ee Dijital ah waa la iibsan doonaa (Avcılar -…
Avcılar-Şükrübey Metrobüs Station-ka Badbaadin
Maanta taariikhda: 16 July 1920 Golaha Guud ee Turkiga (TGNA) wuxuu raadinayay dibadda
IZBAN ayaa riyooyin ah